ऋषि धमलालाइ प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ- ‘काेराेनाकाे कारण प्रचण्डसँग हात मिलाउन सकिदैन्’
भाद्र १४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सँग मन मिलिसकेकाे बताएका छन् । पत्रकार ऋषि धमलासँग प्राइम टाइम टेलिभिजनमा शनिबार साँझ भएको संवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्।
प्रचण्ड सँगकाे असमझदारी अन्त्य भएकाे र अब असमझदारी नभएकाे उनले उल्लेख गरे । अहिले काेराेनाकाे कारण प्रचण्ड सँगहात मिलाउन नपाएकाे उनले बताए । ‘प्रचण्ड र तपाईंबीच रहेको असमझदारीकाे अन्त्य भयाे ?’ भनेर धमलाले साेधेकाे प्रश्नकाे जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीलेले भने, ‘प्रचण्ड र म बीचको असमझदारी मिलिसक्यो । मनै हात मिलाउने हो भने मिलाउन सकिन्छ। तर कोरोनाले गर्दा प्रचण्डजीसँग हात मिलाउन सहिदैन् ।’
उनले आगामी एकता महाधिवेशनमा सहमतिबाटै नेतृत्व छानिने बताए। आफू उठ्ने या अर्को नेतालाई समर्थन गर्ने कुरा अहिले नै चर्चा गर्न उचित नहुने उनले बताए। उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावले पार्टी एकता बचाइ राख्‍न भूमिका खेलेको स्वीकारे। ‌
ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे आफूले विचार गरिरहेको पनि बताएका छन्। ओलीले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्ने योजना नरहेको बताए। उनले अर्को चुनावपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीहरु हेरफेर गरिने दाबी गरे।
‘मुख्यमन्त्रीहरु चुनावपछि मात्रै फेरिन्छन्’, उनले भने, ‘हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौं, देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ।’ अर्थमन्त्री परिवर्तनका विषयमा उनले अझै दुई चार दिन हेर्न आग्रह गरेका छन्। ‘अझै दुई चार दिन हेरौं न, भदौ २० गते पनि आउन लाग्दैछ’, उनले भने, ‘कार्यशैली त सबैको कसलाई पो मन पर्छ र? तर म अर्थमन्त्रीको कामबाट सन्तुष्ट छु।’
हेर्नुहाेस पत्रकार ऋषि धमलासँग प्राइम टाइम टेलिभिजनमा प्रशारण भएकाे अन्तरवार्ता
मिडियमा हल्ला आएकाे भन्दै प्रधानमन्त्री आक्राेश, बामदेव गौतमको सिफारिसबारे प्रस्ताव भएन
नेकपाले गर्याे बामदेव गाैतमलाइ तीन छक्क पर्ने निर्णय
नेकपाले १० जनासम्म मन्त्री परिवर्तन गर्दै, काे-काे बन्दैछन् नयाँ मन्त्री ?
ओली र प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा चर्काचर्की